हामीले अहिले डा.केसीका बारेमा नलेखे, नबोले र समर्थन नगरे हामीलाई महापाप लाग्ने छ ! « Light Nepal
हामीले अहिले डा.केसीका बारेमा नलेखे, नबोले र समर्थन नगरे हामीलाई महापाप लाग्ने छ !
को हुन डा. गोबिन्द केसी ? धेरै अघि मेरो मनमा पनि अरु सबैलाई झै कहुतुहलता जागेको थियो।न कुनै राजनैतिक या बिशिष्ट ब्यक्तित्व, न कुनै सेलिब्रेटि,न त कतै सुनेको नाम..
एकाएक समाचारहरु आएपछि मात्रै थाहा भयो गोबिन्द के सि भन्ने एउटा टिचिगं अस्पतालको डाक्टर रहेछ भन्ने कुरा।
उनको पहिलो,दोस्रो र तेस्रो अन्सन कहिले,कसरी र कस्तो भयो भन्ने बिषयमा पनि म अनबिज्ञ नै छु अझै पनि।एकैपटक चौथो अन्सनबाट मेरो कानमा परेको हो गोबिन्द के सि भन्ने नाम।
अनन्तरत अन्सन गरेपश्चात उनका मागहरुको सम्बोधन स्वरुप तात्कालिन सरकारले ‘माथेमा प्रतिबेदन’ बनाईदिएको थियो रे। माथेमा प्रतिबेदन पछि मस्यौदा बनिसक्दा सहमति भएका महत्वपूर्ण र जनपक्षिय बुदाहरु धैरे काट-छाट गरियो भन्ने उनको सरकार उपर आरोप छ। बास्तबमा ईमान्दार भएर भन्ने हो भने,के हो माथेमा प्रतिबेदन र के के बुदाहरु त्यसमा अटाईए या फालिए भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। तर मलाई यति कुरा थाहा कि, शुसाशनका निमित्त ११ औ पटक आफै मृत्यूशैयामा सुत्नसक्ने गोबिन्द केसि नाम गरेको डाक्टर कर्तब्य निष्ठ छ, देश र गरिब जनताप्रति ईमान्दार छ। यस बिषयमा कसैले मलाई गोबिन्द केसिको अन्धभक्त होस भन्छ भनेपनि भनोस।
हत्या,हिसां,बन्द-हड्ताल,लडाई, कलहको संस्कृति सिकाउने महान राजनैतिक दलका अन्धभक्त भेडाहरु उत्पादन हुने कारखानारुपि यो देशमा कसैले मलाई शुसाशनका निम्ति मर्न तयार एउटा बीर योद्धाको अन्धभक्त भन्छ भने मलाई त्यो सहर्ष स्विकार्य हुनेछ। र यसमा मेरो कुनै राजनैतिक एवम ब्यक्तिगत उत्कण्ठा या पूर्बाग्रह पनि हुनेछैन।
खैर! हरेक मान्छेको बिश्लेषण गर्ने आ-आफ्नै तरिका हुनसक्दछ।त्यसैले डा. गोबिन्द के सि को समर्थन या बिरोधमा को को लागे या लागेनन भनि गनेर बस्ने पक्षमा पनि छैन म।तर एउटा कुरा भने प्रष्ट छ कि, देश र जनतलाई माया गर्ने हरकोहि नेपालीले दिल खोलेर उनको समर्थनमा बोल्न सक्नुपर्छ।
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा भएको राजनैतिक हस्तक्षेप र माफियातन्त्रको ठाडो अत्याचार निर्मूलिकरणका निमित्त एउटा असाधारण मान्छे जन्मनु जरुरत थिये र त्यहि मान्छे आज डा. के सि भएर जन्मिएको छ।
‘एक जूगमा एकदिन एक पटक आउछ’ भनिन्छ। सायद त्यो निर्णायक दिन अब छिट्टै आउनेबाला छ।
नेपालको कूल जनसंख्याको करिब ८०% मानिसहरु गाउमा बस्ने गरेको र अधिकांश मेडिकल कलेज लगायत ठुला अस्पतालहरु शहर केन्द्रित मात्रै भएकै कारण दूर्गम र बिकट भेगका लाखौ मानिसहरु गुणस्तरिय स्वास्थ सेवा बाट बन्चित हुनुपरेको तथ्य सर्बबिदितै छ।प्रत्येक बर्ष कर्णालि तथा सूदुर पश्चिमी बिकट पहाडि जिल्लाहरुमा झाडा पखाला र महामारिमा पनि जिबनजल, पारासिटामोल जस्ता साधारण औषध उपचार नपाएर सयौ नेपालीले मूत्यूबरण गर्नुपरेको तितो यथार्ततालाई तथ्यांकले संख्यामै दर्शाउछ।
त्यसैले देशका गरिब जनताहरुले पनि न्यूनतम स्वास्थसेवा पाउनु पर्दछ।चिकित्साशास्त्रलाई पैसा कमाउने निजी हतियार मात्रै नबनाई सेवा मूलक र जनमूखि बनाउनु पर्दछ।दूर्गम एवम अति बिकट ठाउलाई केन्द्रित गरेर अब उपरान्त खोलिने मेडिकल कलेज पूर्णतया सरकारी स्वामित्वमा खोलि बैद्धिक तृक्षणताका आधारमा निशुल्क अध्यापनको ब्यबस्था गराई दक्ष चिकित्सक उत्पादन गरिनु पर्दछ। र चिकित्साक्षेत्रमा हुने उच्च पदस्थ संबैधानिक निकायको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई बन्द गरि चिकित्साक्षेत्रमा अख्तियारी तथा शक्ति दूरुपयोग गरि माफियाकारणको हाबि गराउने बिरुद्ध कारबाहि हुनुपर्दछ। यि र यस्तै थोरै र साधारण मागहरु छन डा. के सि का।
तर प्रत्येक साल जाजरकोटको महामारीमा बिपत्तिका अनेकन बाधा पन्छ्याउदै पिढ्यूमा औषघिको बोरा बोकेर कुद्ने डा. के सि जस्ता निष्ठावान ब्यक्तिलाई पागल हो भनेर कुर्लने सज्जनहरु पनि देखिए।राजनैतिक उत्कण्ठाका साथ डा. के सि गलत छ भनेर ब्यानरै बोकेर अन्सन भाड्न जाने बैद्धिक जमात पनि हेरियो।यहा सम्म कि, डा. के सि को अन्सन पछाडिको भित्रि कनेक्सन भनेर लेख्ने अनलाईन म्यागजिनका अति बरिष्ठ पत्रकार महोदयहरु पनि भेटिए। यि सारा तमाशा देखेर मलाई लाग्यो साच्चिकै सतिले सरापेको देश रहेछ हाम्रो।ति सबैलाई पनि एकदिन त मर्नपर्छ। आफ्नो क्षणिक स्वार्थ र राजनैतिक पूर्बाग्रहका लागि डा. के सि जस्तालाई बिचलित गराउन खोजेर आफू नर्कमा जाने बाटो आफै खन्दैछन यिनिहरु।
मेरो बुझाई गलत पनि हुनसक्छ। तर मैले बुझेको डा. केसि एउटा यस्तो डाक्टर हो जसको घर भनेकै अस्पताल र परिवार-आफन्तजन भनेकै दिनदूखि र बिरामि।त्यसैले पनि डा. गोबिन्द केसि का हरेक आन्दोलन र सत्याग्रहहरुमा मेरो हमेसा ऐक्यबद्दता थियो, छ र हुनेछ।
यो बेला पनि मैले डा. केसि का बारेमा लेखिन भने मलाई पाप लाग्ने छ। उनको एक अन्धभक्त समर्थक भएको हैसियतले म गर्बका साथ भन्छु;
“यदि यो देशमा सामाजिक पर्याबरण र ब्यबस्था दुबै सफा हुनुपर्दछ भनेर शुसाशनका निमित्त भोक भोकै लड्न र मर्न तयार ब्यक्तिलाई पागल भनिन्छ भने; ‘म पनि पागल हू’…”
अन्तत: एउटा लोकतान्त्रिक मूलुकमा कुनै एक ब्यक्ति ११/११ पटक सम्म एउटै माग लिएर सत्याग्रह गर्नु भनेको लोकतन्त्रिक बिधि र शासनपद्दतिकै उपहास हो। तपाई हामिलाई लाज लाग्नुपर्ने बिषय हो।यहा राज्यको निति कार्यान्वयन पक्षलाई कमजोर बनाउने माफियाहरुको उच्चस्तरिय पकडले देशलाई भित्रभित्रै लुटिरहेको छ।र अब त्यहि माफियामूखि देशद्रोहि संयन्त्रले डा. गोबिन्द के सि को पनि अन्सनकै बहानामा’सर्प पनि मर्ने, लठ्ठि नि नभाचिने’ गरि ज्यान लिन सक्छ।
अब जिम्मेबारी तपाई हाम्रो काधमा आईसकेको छ,
डा. केसिको भोक पेटमा परिबर्तन र सुशासनको अन्न दिने।
हो अब अभिभारा तपाई हाम्रो पनि डा. केसि लाई साथ दिने।
स्मरण रहोस;केहि दशकहरुको अन्तरालमा
महान बिचारक,दार्शनिक ,राजनेताहरु त थुप्रै जन्मिएलान तर देशले अर्को कर्तब्यनिष्ठ,ईमान्दार र आदर्शको प्रतिमूर्ति गोबिन्द केसि जन्माउनलाई यूगौ लाग्नेछ… त्यसैले यो सुशासन र स्वाभिमानको यो लडाईमा म डाक्टर केसीको पक्षमा छु !